कर्णाली विवादबारे ओली-प्रचण्डबीच लामो छलफल, के जुट्यो सहमति ? — Sanchar Kendra
कर्णाली विवादबारे ओली-प्रचण्डबीच लामो छलफल, के जुट्यो सहमति ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न प्रचण्ड बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच अढाइ घण्टा लामो सम्वाद भएको छ । कर्णालीमा नेकपामा देखिएको विवादबारे दुई अध्यक्ष बीच सम्वाद भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, ठोस् सहमति भने जुट्न सकेन ।
यस्तै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्‍दाको आज पनि सुनुवाई स्थगित भएको छ। न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले सुनुवाइ स्थगित स्थगित भएको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थप संवैधानिक नियुक्तिमा रोक लगाउँदै यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशबाट गर्न आदेश दिएका थिए ।
तर, न्यायाधीशहरूमा कोरोना देखिएपछि उपाध्यक्ष गौतमको मुद्‍दा संवैधानिक इजलाशमा पूर्ण रूपमा छलफल हुन पाएको छैन । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।